Daaciga Rodney Howard-Browne waxaa lagu xukumi karaa xabsi ah dambiyada ka dhanka ah sharciyada Corona | Apg29
Khatarta lagu xukumay ilaa 60 maalmood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $ 500.
Rodney Howard-Browne waa wasiirka ugu horeysay ee Maraykanka ayaa halis ugu xeer dambiyada ka dhanka ah Xeerka Corona.
sharciyada Corona Violation
Rodney Howard-Browne waxaa sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan Wacdiyuhu wuxuu qaatay wax-u nooleynta qosol ee Sweden ee 1990 halista lagu xukumay ilaa 60 maalmood oo xabsi ah iyo ganaax dhan $ 500 isagoo shirarka abaabulan ee uu kaniisad boqolaal visitors at laba jeer oo kala duwan, inkastoo ganaax Corona masuuliyiinta 'on ururinta leh in ka badan toban qof.
wadaad First kuwaas oo xeer halis dambiyada ka dhanka ah Xeerka Corona
kaniisadda Rodney Howard-Browne ee loo yaqaan The River ma aha kaniisadda kaliya ee dalka Mareykanka in ay diidaan maamulka by diyaarinta kulamo badan ka qayb oo aan guriga dhex online sida jameeco kale oo badan. Laakiin Rodney Howard-Browne waa wasiirka ugu horeysay ee Maraykanka, kuwaas oo xeer halis dambiyada ka dhanka ah Xeerka Corona .
shows warbixin A US in mid ka mid ah toban Maraykanka ayaa sheegaya in jameeco ay sii wadi doonaan si ay ugu dabaal adeegyada Sunday sida caadiga ah ee kaniisadaha, inkastoo ganaax masuuliyiinta 'on ururinta leh in ka badan toban qof.